काठमाण्डौं यात्रामा मेरा – रंगीन बास र छुटेको बस (परिहास) | Seto Patrika
काठमाण्डौं यात्रामा मेरा – रंगीन बास र छुटेको बस (परिहास)
बस आफ्नै गतिमा दगुरीरहेको थियो । मेरो छुटेको अर्को बसको भेटाउने आशा – डाँडा माथी बाट घाम अस्ताई सकेको थियो । खलाँसी तत्काल चढेका यात्रीहरुलाई भाडा उठाउँदै मेरो सिट सम्म आईपुग्यो । मैल पहिले नै पटक पटक केहि छिन पछि दिन्छु भनि पठाएको थिएँ । त्यसैले मैले त्यो भन्दा धेरै, हरेक बहानामा छल्ने प्रयास गरिन । म बसको सबै भन्दा पछाडी अन्तिम सिटको देब्रे झ्यालमा लुस्रुक्क बसिरहेको थिएँ । अलिकति आफु आफै भित्र कता कता हिनताबोधले ढिपी कसिरहेको थियो म मा ।
“भाई ! भाडा दिनुस् ।”
“ए ! पख्नुस् है ।” उसको आवाजले मेरो एकाग्रता भंग भएको नाटक गर्दै मेरो झोलाको र्साईड पकेट खोलें र सोधें ।
“दाई ! बिर्तामोडबाट आएको काठमाण्डौं को हिमाल फस्ट गाडी भेटाउँछ कि भेटाउँदैन यो गाडीले?”
“गाह्रो-गाह्रै पर्छ भाई । भेटाउन पनि सक्छ नभेटाउन पनि सक्छ ।”
“किन भाईको बस छुटेको हो ?” छेवैका एकजना बोले ।
“यदि भेटायो भने म चढाएर पर्ठाई दिउँला ।” खलाँसीले सहानुभूती देखाउने कोशिस गरे ।
हामी बीचको अन्तरक्रिया बाट निर्धारीत २५० रुपैयाँ मैले थमाई दिएँ । गह भरी आँशु सलबलाईरहेको थियो । भीत्र भीत्रै आत्मा बेजोडले रोईरहेको थियो । रोएका मनहरुलाई तर्राईका सम्थर खेतहरु हेरेर, पहिलो चोटी देख्दा अनौठो लाग्ने, पहिले मैले चित्रमा देखेका मन्दिर जस्ता बिजुलीका खम्बाहरु, एक पछि अर्को गर्दै हुइँकिएको दृष्यमा भूलाउने प्रयास गरिरहेको थिएँ । थुप्रै बाटा भरी घरहरु, बजारहरु, शहरहरु हुँदै म चढेको बस एक ठाउँमा पुगेर थचक्क रोकियो । मैले बुझेँ बिहानको नास्ताको लागी रोकिएको रहेछ । त्यो ठाउँ पुर्व बाट काठमाण्डौं हिंडेका बसहरुको बिहानीको खाजा खाने ठाउँ रहेछ भनेर अनुमान काट्न मलाई गार्ह्रो परेन, किनभने त्यहाँ लहरै दिवा बसहरु रोकिईरहेका थिए र यात्रुहरु पनि यताउती उस्तै गरि । बसहरुको लस्करमा मैले आँखा डुलाएँ । सब भन्दा अगाडी ‘बिर्तामोड देखि काठमाण्डौं सम्म’ लेखिएको ‘हिमाल’ बस थियो । मेरो छेउमा बसेका एक तर्राईबासी शिक्षित देखिने मधेशीले हिमाल फष्ट बस यहि हो , छिटो जाऊ भनेर दिशाबोध गरे । म हतार हतार ओर्लेर टिकटको अर्धकट्टी हातैमा च्याप्दै त्यो बस तर्फलम्कें । बस धोन्द्रो आवाजमा स्र्टार्ट भई सकेको थियो । खलाँसी अघि नै त्यहाँ पुगेका रहेछन् । उसले मलाई ५० रुपैयाँ काटेर २०० फिर्ता दियो । बस भीत्र चढें । आफ्नो सिट खोजेर बसें । दाईले बिदेश बाट पर्ठाई दिनुभएको हातको घडिनेर आँखा घुमाएँ । बिहानको ७:४५ भएको रहेछ । लामो आरामको सास तानेर सानो आवाजमा एक्लै बोलें ।
“उफ् ! साला बस छुटेर दिमाग खराब ।”
“कहाँ बाट छुटेको भाई ?”
“बिर्तामोड बाट ।”
म सिट नं. ७ ए मा बसेको थिएँ, ७ बी मा एक त्यस्तै ३०/३५ का एक ब्यक्ति बसेका थिए । सामान्य गफगाफ भयो । ऊ पाँचथर ओयामको रहेछ तर परिवार संगै काठमाण्डौं बाँसबारी बसोबास रहेको उनले बताए । छुटेको बस भेटाए पछि म भित्र फुरुङ्ग-मात निकै नै चढको र निकै नै हल्का महशुस भएको थियो मलाई । पैसा पनि त अलिकति गईसकेर घुरेको थियो । बसकै गति बीच बाहिर बिल्डिङ्गहरुमा झुण्ड्याईएको र्साईनबोर्ड तिर हेरें । ‘माहुरीघार’ वा यस्तै के रहेछ त्यो ठाउँको नाम ।
“भाई ! तिमी त टाढै हिंड्न लागे जस्तो छ नि ?”
“हजुर दाई ! काठमाण्डौं सम्म ।”
“काठमाण्डौं ! – अनि तिमी एक्लै ?”
“डर लाग्दैन ?- सुब्बा कै छोरो रहेछौ ।”
सायद म भर्खरको कलिलो बिद्यार्थी त्यसमाथी गाउँले, त्यति टाढा जान लाग्दा उसलाई शंका लाग्दो हो, बाटोमा कतै केहि भईहाले के गर्दो हो यो फूच्चेले भनेर । यी सार्की माईला पनि कम्ता भाग्यमानी होईनन् असली नाम भने प्रेम हो उसको । बजारमा ‘सार्की माईला’ का नामले चिनिन्छन् । प्रेम जुत्ता स्टोरका मालिक पनि हुन उनी । उत्ति बेला लाखको कम्ता महत्व थिएन, त्यति बेला टुबोर्ग बियरमा मोटरर्साईकल चिठ्ठा पारेर वरपर एकाएक चर्चामा आएका थिए, जतिबेला हामी सानै थियौं । र यासोक बजारमा सिमेण्टको पक्की घर, सररर बेरिने जस्ताको आधुनिक सटर् भएको पहिलो घर चिट्टीक्क बनाए उनले । र प्रेम जुत्ता स्टोर मा आज सम्म छालाको जुत्ता मर्मत देखि लिएर नयाँ जुत्ता बनाउनुमा तल्लिन रहन्छन् उनी ।
यात्रा खुब रमाईलो लागीरहेको थियो मलाई । कतै राजनितिका त कतै साहित्यका कुरा चलिरहेका थिए । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी संगठन इलामका बिद्यार्थीहरु पाँचथर, फिदिममा कार्यक्रम भ्याएर फर्किरहेका थिए भने त्यसै बसमा झापा दमक का एक साहित्यकार मेघराज तिम्सिना पनि आफ्नो जन्मथलो पाँचथर चढेर कर्मथलो दमक झरिरहेका थिए । उनि एउटा साहित्यीक बाषिर्क पत्रिका ‘प्रतिभा’ पनि चलाउँदा रहेछन । यी सब कुराहरु मुक दर्शक रहेरै मैले, मात्र बुझिरहेको थिएँ । त्यहाँ एउटा मेघराज तिम्सिना को कुरा मलाई निकै नै घत लागको थियो – ‘संस्थाहरुमा सबभन्दा गरिब संस्था साहित्यीक संस्था हो ।’ स्वयं मलाई आफ्नो मातहतमा रहेको ‘दोबाटो’ पत्रिकाले अनुभूत गराएको तितो अनुभूति थियो यो मेरो । अप्रत्यक्ष रुपमा समाजलाई डोर्याउने, वा समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने साहित्यको लागी अलिकति लगानी गर्न जो कोहि पनि एक पाईला अघि र्सन हिचकिचाउँछन्, कथित शिक्षित भनाउँदाहरु सम्म । यसको मुख्य कारण जननीवन प्रत्यक्ष लाभमा निर्भर रहनु नै हो ।
र्इलाम पुगे पछि रेणुका बहिनी ओर्लिईन् । अरु अरु ओर्लिए । धेरै ओर्लिए, थोरै चढे । बस अलिकती खुकुलो भयो । ठिक साढे ३ बजे हाम्रो बस त्यहाँ थियो । गति लिए पछि ४ बजे माई खोला झर्यो । माई खोला हिन्दु धर्म प्रति आस्थावान ब्यक्तिहरुका लागी क्षतक्षती रुपमा पुज्ने गरिन्छ । गाउँका बुढापाकाहरु भन्ने गर्थे – ‘देउमाई जान्छु भनेर मुखले बोली सकेपछि, एक पटक जसरी पनि जानै पर्छ, होईन भने आफ्नो जीवनमा वा आफ्नो सन्ततीलाई कुनै अनिष्ट हुन्छ रे ।’ बिहा गरेको निकै बर्ष पनि सन्तान नभएका, सन्तान भएर पनि नरहेका, छोरी छोरी मात्र भएर छोराको रहर भएका, छोरै छोरा मात्र भएर छोरीको रहर भएका दम्पतीहरुलाई देउमाईमा गई भाकल चर्ढाई माई माता संग सन्तान माग्ने सल्लाह दिन्थे गाउँघरमा बुढापाकाहरु र – ‘फलाना फलाना देउमाई मा गई, माई माता संग मागेर जन्मेका हुन ।’ भन्दै औंला भाँची भाँची गनेर देखाउँथे । पुल नटेक्दै छाति छोएर धेरैले ढोगे । मैले पनि त्यसै गरें ।
रमार्इला रमाईला दृष्यहरु झ्याल-झ्याल बाट यात्रुहरुको आँखा सँग जुधाउँदै गाडीले आफ्नो गतिमा कायम लिईरहृयो । फाल्गुनको महिना न हो, असार साउन जस्तो घाम कहाँ ढिलो लुक्छ र – जाँदा जाँदै अँध्याराले छोप्न थाल्यो । बाटो भरि जताततै घरघरमा बत्तीहरु बल्न थाले । हुँदा हुँदै सम्थर बाटोमा बस दगुर्न थाल्यो । तब मन भीत्र अलिकती सन्त्रास फैलिन थाल्यो । अब यत्तिका रातमा बिर्तामोड पुगेर अलपत्र पो भईने हो की? – यस्तै सन्त्रासले थिचिरहेको बेला छेवैका यात्रुले संगै एकै ठाउँमा बस्नलाई सोध्यो । ऊ पनि एक्लै नै रहेछ । ऊ चाहिं तर्राई सम्म मात्र झर्दै थियो । मेरो यात्रा बारेमा उनले पनि आश्चार्य पोखेका थिए । म गाउँलेको अनुभूतमा बस. आकाश खसेको, जस्तो ठाउँमा पुगेर रोकियो । उल्का खसे झैं अगाडी लाईट बालेर मोटरर्साईकलहरु दगुरीरहेका थिए । समय बेलुकाको ७ बजेछ ।
जब रात लम्कदै गयो । मैले आफूले आफैंलाई ठम्याउन सकिरहेको थिईन – कुनै एक होटलमा सुतिरहेको छु या त कुनै उपन्यास पढ्दै जाँदा बीच भागको एक कामुक खण्डमा पुगेको छु ? – । बिपरित लिङ्गी बीच अङ्गालो हालेको समेत प्रत्ययक्ष आजसम्म नदेखेको मान्छे म ।
बुरुक्क हुत्तिएर बाहिर निस्किन् किशोरी । लगत्तै यौटा केटा आएर च्याप्प समाते उनले । दबाएको आवाजमा ‘नाई छोड्नुस् भन्या’ भन्दै बल गर्दै थिईन । केटाले त वाथरुम तिर पो हुइँक्याए । निकै बेर पछि, जिङग्रीङ्ग हुन गएको केशराशी सम्याउँदै किशोरी अघि अघि आईन, केटा पछि पछि । यता म भने झन झन कामुक हुँदै गईरहेको थिएँ । यस्तो अबस्थामा एउटा किशोरलाई हस्तमैथुनको साहारा बाहेक कुनै बिकल्प पक्कै रहदैन । वाथरुम गएर फर्कें । समय ठिक रातको १२ भएको रहेछ । स्खलन पछि केहि गलेंछु क्यार । त्यस पछि भुसुक्क निदाएँछु ।
भोलिपल्ट बिहान ३ बजे आँखा उघ्रियो, उठें, हातमुख धोएँ, उति बेला सम्म मा अरु पनि सबै ब्युँझिए । साँझ सँगै खायौं, पियौं, वर पर घुम्यौं तर औपचारिक चिनजान भएको थिएन युवक संग हाम्रो । मैले सोधें । उसको नाम निर्मल खालिङ्ग, सुरुङ्गा-८, झापा बसोबास बताए उनले । सबै संग बिदा मागी म हिड्न लागेको थिएँ । युवक पलङ्ग बाट उत्रँदै बोले – ‘यो होटलको चाला मलाई ठिक लागेन ।’ मैले पनि भ्याई नभ्याई देखेका सबै बताई दिएँ । ‘ जमाना पनि के आयो आयो? -‘ बृद्धले मुख खोले । अर्को अर्ध-बृद्धले सहि थापे । म त्यहाँ बाट बाहिरिएँ ।
निक्कै पर सम्म हिंडे पछि बल्ल टिकट काउण्टर भेटें । हिमाल फष्ट बसको लागी टिकट काटें । काँकडभित्ता बाट बस आई पुग्नु पर्छ, समय अझै बाँकि छ, एकछिन यतै वरपर घुम्दै गर, बस आए पछि हामी आफैं बोलाउँछौं, भनेका थिए काउण्टरवालाले । म ढुक्क थिएँ । लाग्यो कति जाती यी मान्छेहरु । यता उता हिंडिरहें । र्सार्बजनिक शौचालय कतै छ कि भनेर आँखा डुलाएँ, कतै देखिन । अन्त्यमा अरु अरु उभिई रहेको खुल्ला शौचालय गएर फर्कें । टिकटमा लेखिएको समय हेरेर बस छुट्ने र्टाईममा काउण्टरकै वरीपरी रहें । समय भए पछि सोधें । अलिकती अझै र्टाईम् लाग्छ भने । १५ मिनेट पछि फेरी सोधें । काँकडभित्ता बाट अझै बस नआई पुगेको जानकारी दिए । एक किसिमले म हतास भएको देखेर मलाई भने – ‘तिमी चिन्ता नगर, गाडी आईपुगे पछि, भाईलाई हामी आफैं बोलाउँछौं । ‘ होला त नि भनेर म पनि काउन्टर छेउ बसेर वरपरका दृश्यहरुमा हराउने प्रयास गरें । घडि हेर्दै उनीहरुकै मुख ताक्दै बसिरहें । टिकटमा लेखिएको समयमा त ४५ मिनेट काटी सक्यो अझै बोलाउँदैनन् । यसो उठेर फेरी काउण्टरको दाईलाई मुख खोलेको त छाँगा बाट पो खसें । ‘बस त गई सक्यो, कहाँ थियौ भाई’- पो भन्छ । रुनु न हाँस्नु पो बनाए मलाई त । दमक तिर सायद भेट्छ होला त्यहाँ सम्म अहिले भाडा नदिनु, यो गाडीले, भेटे पछि त्यै बसमा चढाउने भन्दै अर्को बसमा चढाएर पठाए । सिट खाली थिएन । त्यसैले उभिएरै जानु पर्यो । उज्यालोले अँध्यारो लाई मास्दै गयो । बस आफ्नै गतिमा हुइँकिदै थियो, म भित्र भने नरमाईलो दिक्दारी छल्किरहृयो र हिमाल फष्ट बस भेट्ने हो कि होईन भन्ने कुराका तरंगहरु उठदै किनारा लाग्दै रहे ।
बस दमक आई पुग्दा पुरै उज्यालो भई सकेको थियो । बस एकछिन रोक्कियो । ओर्लेर यताउता हेरें । मेरो छुटेको बस त्यहाँ थिएन । फेरी उहि बसमा चढें । केहि समय पछि खलाँसीले -‘अब यो बसले हिमाल फष्ट गाडी भेटाउँदैन’ भन्दै भाडा माग्न आई पुग्यो । तै पनि भेर्टाई हाल्ला कि भन्ने आशा उत्तिकै थियो म भित्र । र मैले नाटकिय ढंगले -‘अब के गर्नु त ! तपार्ँइकै गाडी चढेर काठमाण्डौं पुग्नु लेखेको रहेछ । झोला भित्र छ पैसा उभिई उभिई निकाल्न अप्ठ्यारो छ । एकछिन भरै मिलाउँला नि हुन्न -‘ आदी इत्यादी भनेर टारी पठाएँ ।
र्इटहरी पुगेर बस रोकियो । आँखा हुत्याएँ वरिपरी तर अहँ थिएन मेरो छुटेको बस । अगाडी तीन वटा लहरै काठमाण्डौं जाने बसहरु थिए । म चढेको बस चौंथो स्थानमा थियो । अगाडीको बस स्र्टार्ट भई सकेको थियो । अरु लाममै पालो पर्खेर बसिरहेका थिए । सोचें -‘यो अगाडीको बसले कतै भेर्टाई पो हाल्छ की? -‘ खलाँसीको आँखा छलेर त्यो अगाडीको बसमा हतपत छिरें । सौभग्य नै भन्नु पर्ला, पछाडी देब्रे झ्यालमा एउटा सिट खाली रहेछ । गएर बसें । कण्ट्याक्टर भाडा उठाउँदै आईपुग्यो । हातमा सानो डायरी लिएर ब्यस्त रहेको बहाना पार्दै, केहि छिन पछि दिन्छु भनेर टारी पठाएँ । उहि खस्रो आवाज सँगै बसले आफ्नै गतिमा खिईसकेका पुराना पाङग्राहरु, बुढो राजमार्गमा घिसारीरहृयो । गह्राहरुमा सुनौलो रंग पोतेर खेत भरी गहुँ लहलहाई रहेको थियो । झारका बुट्टाहरुमा टल्किने शित् सुक्दै गई रहेका थिए । यता भने मेरो आँखाको नानीमा हिनताबोधले भित्र भित्रै आँशु अलि-अलि गर्दै टिलपिलाई रहेको थियो । अझै पनि आँशु सलबलाई रहेका आँखाले अगाडी सडकका रेखाहरुमा आशातित नजरले हेरिरहृयो । तर पलपल आशाका स्तम्भहरु जिर्ण हुँदै गए, भत्किँदै गएका सडकहरु जस्तै गरी । मेरो छुटेको अर्को बसको भेटाउने आशा – डाँडा माथी बाट घाम अस्ताई सकेको थियो । म बसको सबै भन्दा पछाडी, अन्तिम सिटको देब्रे झ्यालमा लुस्रुक्क बसिरहेको थिएँ । फेरी, खलाँसी तत्काल चढेका यात्रीहरुलाई भाडा उठाउँदै मेरो सिट सम्म आईपुग्यो । मैल पहिले नै पटक पटक केहि छिन पछि दिन्छु भनि पठाएको थिएँ ।त्यसैले मैले त्यो भन्दा धेरै, अनेक बहानामा छल्ने प्रयास गरिन । आफ्नै गतिमा दगुरीरहेको थियो, बस ।
Prevकिम जोङ उनको मुटुको शल्यक्रिया
Nextलोकहित पक्षधर भानुभक्त